Ná Hiob Yɛ Onipa Bɛn? | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Bicol Bislama Boulou British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ná Hiob Yɛ Onipa Bɛn?
Papa bi tenaa kurow bi a yɛfrɛ no Us. Ná ɔsom Yehowa. Ne din de Hiob. Ná ɔwɔ sika pii, na na n’abusua yɛ kɛse. Ná ne tirim nyɛ den. Ɔboaa ahiafo, mmaa a wɔn kununom awu, ne mmofra a wonni maame ne papa. Esiane sɛ na Hiob yɛ nneɛma pa nti, na adebɔne biara rento no da anaa?
Nea na Hiob reyɛ nyinaa, sɛɛ na Satan Ɔbonsam rehwɛ no. Nso na Hiob nnim. Yehowa bisaa Satan sɛ: ‘Woahu m’akoa Hiob? Obiara nte sɛ ɔno wɔ asase so. Mekasa kyerɛ no a otie, na ɔyɛ adepa.’ Ɛnna Satan buaa sɛ: ‘Ɛyɛ ampa, minim sɛ Hiob tie w’asɛm. Adeɛ yi woabɔ ne ho ban na woahyira no. Woama no asase ne nyɛmmoa. Wopɛ a, gye ne nyinaa na wubehu sɛ ɔrensom wo bio.’ Yehowa nso kaa sɛ: ‘Wubetumi asɔ Hiob ahwɛ, nanso hwɛ na woankum no.’ Adɛn na Yehowa maa kwan ma Satan sɔɔ Hiob hwɛe? Efisɛ na Yehowa gye di paa sɛ Hiob bedi nokware.
Satan fii ase de ɔhaw bebree baa Hiob so. Nea edi kan, ɔmaa nkurɔfo bi a wɔfrɛ wɔn Sabafo bewiaa Hiob anantwi ne ne mfurum nyinaa. Ɛno akyi no, ogya hyew Hiob nguan nyinaa. Afei nkurɔfo bi a yɛfrɛ wɔn Kaldeafo bewiaa ne yoma nyinaa. Wɔsan kunkum Hiob nkoa a na wɔrehwɛ ne mmoa so no. Afei, ɔhaw kɛse bi baa Hiob so. Ná Hiob mma nyinaa ahyia baabi regye wɔn ani, ɛnna dan no bu guu wɔn nyinaa so kunkum wɔn. Ɛyɛɛ Hiob yaw paa, nanso wannyae Yehowa som.
Ná Satan ayɛ n’adwene sɛ ɔbɛma Hiob abrɛ akyɛn nea ato no no. Enti ɔmaa Hiob ho nyinaa yɛɛ kuru. Wei maa Hiob honam nyinaa yɛɛ no yaw paa. Ná onnim nea enti a saa nneɛma yi nyinaa ato no. Nanso, ɔkɔɔ so ara som Yehowa. Onyankopɔn huu nea na Hiob refa mu nyinaa, na ɛma ɔpɛɛ Hiob asɛm.
Satan san maa mmarima mmiɛnsa kɔsɔɔ Hiob hwɛe. Wɔka kyerɛɛ no sɛ: ‘Ɛbɛyɛ sɛ woayɛ bɔne bi na wopɛ sɛ wode sie. Enti Onyankopɔn na ɔretwe w’aso.’ Ɛnna Hiob kaa sɛ: ‘Menyɛɛ bɔne biara.’ Nanso Hiob nyaa adwene sɛ ɛyɛ Yehowa na ɔde ɔhaw no aba ne so. Na ɔsan kaa sɛ Onyankopɔn ne no anni no yiye.
Wɔrekasa nyinaa na aberante bi a yɛfrɛ no Elihu te hɔ dinn retie wɔn. Afei Elihu kaa sɛ: ‘Nea mo nyinaa reka no nyɛ nokware. Yehowa yɛ kɛse sen sɛnea yebetumi ate ase. Ɔrentumi nyɛ adebɔne da. Ohu ade nyinaa, na sɛ obi refa ɔhaw bi mu a, ɔboa no.’
Afei Yehowa ne Hiob kasae. Obisaa Hiob sɛ: ‘Bere a mebɔɔ ɔsoro ne asase no, na wowɔ he? Adɛn nti na woreka sɛ me ne wo anni no yiye? Worekasa deɛ, nanso wunnim nea woreka.’ Hiob gyee ne mfomso toom, enti ɔkaa sɛ: ‘Manyɛ no yiye. Ná mate wo ho asɛm, nanso afei na mahu wo yiye. Biribiara nni hɔ a worentumi nyɛ. Mepa wo kyɛw, manka no yiye.’
Sɔhwɛ a ɛbaa Hiob so no baa awiei. Yehowa maa Hiob nyaa ahoɔden bio. Afei ɔmaa no nneɛma bebree sen nea na ɔwɔ kan no. Hiob nyin kyɛe na onyaa anigye nso. Bere a na nneɛma mu yɛ den ma Hiob mpo no, otiee Yehowa. Enti Yehowa nso hyiraa no. Wo nso, wubesuasua Hiob na woakɔ so asom Yehowa ɛmfa ho ɔhaw biara a ɛbɛto wo?
“Moate Hiob boasetɔ no ho asɛm na moahu nea Yehowa ma efii mu bae.”—Yakobo 5:11
Nsɛmmisa: Sɔhwɛ bɛn na Satan de baa Hiob so? Nneɛma pa bɛn na Yehowa yɛ maa Hiob?
Hiob Ho Bible Krataa
Hiob nhwɛso no ma yɛnya akokoduru a yɛde bɛgyina ɔhaw biara a ɛto yɛn no ano. Bible krataa yi bɛma woate saa asɛm no ase. Twe bi.
BIBLE NHOMA NNIANIM NSƐM VIDEO
Hiob Nhoma no Nnianim Nsɛm
Wɔn a wɔdɔ Yehowa nyinaa behyia sɔhwɛ. Hiob asɛm no ma yenya awerɛhyem sɛ yebetumi adi Yehowa nokware wɔ sɔhwɛ biara mu na yɛagye Yehowa tumidi atom.